Gbasara Anyị | Shijiazhuang (Yangzhou) Fayun Electric Co., Ltd.
Welocome to Fayun
A na-akpọ Shijiazhuang Fayun Electric Company na Yangzhou Fayun Electric Company na-akpọ Fayun Electric Co., Ltd. Shijiazhuang Fayun Electric Company guzobere na 2000, na-ekpuchi mpaghara nke square mita 20,000, na ọnọdụ ya na obodo Shijiazhuang, mpaghara Hebei nke China. Ka ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-eto ma na-eto eto, ụlọ ọrụ ọhụrụ aha ya bụ Yangzhou Fayun Electric Companywasoro ya na obodo Yangzhou, mpaghara Jiangsu nke China na 2010, na-edebanyeghị ikike nde 50, na-enwe saịtị 30,000 square mita.
Shijiazhuang Fayun Electric Company e guzobere na 2000.
The ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị 30000 square mita.
Metal Oxide Varistors anyị na-eme kwa afọ bụ ihe dịka 1,500 tọn.
IS09001 agbaala ya: 2000 International System Management System.
Fayun Electric Company bụ ọkachamara na nyocha na mmepụta Metal Oxide Varistors, Epoxy Fiberglass Rods / Tubes, Lightning Arresters, Composite Insulators, Cutout Fuses na wdg. Anyị kwa afọ mmepụta nke Metal Oxide Varistors bụ banyere 1,500 ton, na nke Faiba glaasi mkpara na Tubes bụ ruru 800 tọn. Anyị na-ewepụtakwa ndị insulators na ndị na-egbu àmụmà 800000 iberibe kwa afọ.
Ogo bụ ndụ nke ụlọ ọrụ
Onwere ụdị ngwa ọrụ niile na - arụpụta, nnwale zuru ezu yana akụrụngwa nyocha yana usoro nyocha na ụlọ ọrụ anyị. Ngwaahịa niile agabigala ule nke mkpuchi nyocha nke National China na Lightning Arrester Quality Surveillance Center. Akwadowokwa ya site na IS09001: 2000 International System Management System. Ndị ahịa anyị sitere na France, Russia, Romania, Slovenia, India, Viet Nam na ndị ọzọ. Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji maka electric ike, chemicalindustry, ụgbọ okporo ígwè, colliery, ikuku iga na oké osimiri mbupu. Company agbaso "àgwà bụ ndụ nke enterprise" echiche nke àgwà, ntị ka ahịa ina, iwu na ụkpụrụ, na-enye ndị ahịa na-eju afọ ngwaahịa na ọrụ.
Site na nnwepụta nnwere onwe na mmepe na-aga n'ihu, ụlọ ọrụ ahụ ga-ewere ihe mgbochi zinc oxide / fiberglass rodịlị dị ka isi, were ihe mkpuchi àmụmà / ihe ndị mejupụtara dị ka ntọala, ma mee ka ụlọ ọrụ ike na-ebuwanye ibu ma sie ike. Dabere na ya, anyị ga-arụsi ọrụ ike na-agbalịsi maka ndị magburu onwe ngwaahịa arụmọrụ na ngwaahịa izu okè. "Ime ihe ziri ezi, ime ihe nke ọma, ịrụ ọrụ ọsụ ụzọ, inwe ọganihu, imepụta ihe ọhụrụ" bụ mmụọ nke ụlọ ọrụ. Ndị ọrụ niile ga - agbaso "ogo kacha mma, afọ ojuju ndị ahịa, mmelite na-aga n'ihu yana ịchụso ọkaibe" amụma dị mma, wee na-agbalite usoro njikwa njikwa mma. N'otu oge ahụ, jiri obi gị nabata ndị enyi azụmaahịa si n'akụkụ ụwa niile ịbịa leta ụlọ ọrụ anyị maka ijikọ aka ọnụ, sonye aka na mmeri. Fayun Electric na-atụ anya a mma, mụ na-aga n'ihu ahịa na gị, ezi obi.